19 Akyiri yi, Saul ka kyerɛɛ ne ba Yonatan ne ne nkoa nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ okum Dawid.+ 2 Nanso Saul ba Yonatan de, na ɔpɛ Dawid asɛm yiye.+ Enti Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Me papa Saul rehwehwɛ wo akum wo. Enti mesrɛ wo hwɛ wo ho yiye anɔpa, na tena ahintawee mu baabi, na fa wo ho sie.+ 3 Na me de, mefi adi akogyina me papa nkyɛn wɔ wuram hɔ, faako a wowɔ no, na me ne me papa bɛkasa ama wo, na mehu nea ebesi na mabɛka akyerɛ wo.”+ 4 Ɛno nti Yonatan kaa Dawid ho asɛmpa+ kyerɛɛ ne papa Saul sɛ: “Mma ɔhene nnyɛ n’akoa Dawid bɔne,+ efisɛ ɔnyɛɛ wo bɔne bi, na wayɛ nnwuma pa pii ama wo.+ 5 Ɔde ne kra too ne nsam+ kokum Filistini+ no ma Yehowa de nkonimdi kɛse gyee+ Israel nyinaa. Wuhui, na wudii ahurusi. Ɛnde dɛn nti na wopɛ sɛ woyɛ mogya a edi bem bɔne, na wukum+ Dawid kwa?”+ 6 Na Saul tiee Yonatan nne, na Saul kaa ntam sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ wɔrenkum no.” 7 Ɛnna Yonatan frɛɛ Dawid, na Yonatan kaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no. Afei Yonatan de Dawid brɛɛ Saul, na ɔbɛtenaa n’anim sɛ kan no.+ 8 Akyiri yi, ɔko sii bio, na Dawid fii adi ne Filistifo kɔkoe, na ɔde okunkɛse kunkum wɔn,+ na woguan fii n’anim.+ 9 Na Yehowa maa honhom bɔne+ baa Saul so bere a ɔte ne fie. Ná peaw kura ne nsam, na na Dawid de ne nsa rebɔ nnwom. 10 Na Saul hwehwɛe sɛ ɔde peaw no wɔ Dawid fam ɔdan ho,+ nanso ɔtwee ne ho+ fii Saul anim ma peaw no wɔɔ ɔdan no ho. Ɛnna Dawid guanee, na ofii hɔ anadwo no.+ 11 Akyiri yi, Saul somaa abɔfo+ sɛ wɔnkɔwɛn Dawid fie na wonkum no anɔpa,+ nanso Dawid yere Mikal ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ woamma wo kra anguan anadwo yi a, ɔkyena wobekum wo.” 12 Ɛhɔ ara na Mikal maa Dawid faa mfɛnsere mu sii fam, na ofii adi de mmirika guanee.+ 13 Ɛnna Mikal faa terafim honi+ de too mpa no so, na ɔde abirekyi nhwi ntama guu atifi, na ɔde ntama kataa so. 14 Na Saul somaa abɔfo sɛ wɔnkɔfa Dawid, na ne yere kae sɛ: “Ɔyare.”+ 15 Ɛnna Saul somaa abɔfo no sɛ wɔnkɔhwɛ Dawid, na ɔkae sɛ: “Monkɔfa no ne mpa so mmrɛ me, na minkum no.”+ 16 Abɔfo no kɔɔ hɔ no, wɔnkɔhwɛ a, terafim honi na ɛda mpa no so yi, na abirekyi nhwi ntama gu atifi. 17 Ɛnna Saul bisaa Mikal sɛ: “Dɛn nti na woadaadaa+ me saa na woama me tamfo+ aguan kɔ?” Na Mikal buaa Saul sɛ: “Ɔno ara na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ma menkɔ! Dɛn nti na woreyɛ ma makum wo?’” 18 Dawid de, ɔde mmirika guanee,+ na ɔkɔɔ Samuel nkyɛn wɔ Rama+ kɔkaa nea Saul de ayɛ no nyinaa kyerɛɛ no. Na ɔne Samuel fii hɔ kɔtenaa Naiot.+ 19 Akyiri yi, nkurɔfo kɔbɔɔ Saul amanneɛ sɛ: “Hwɛ! Dawid kɔ Naiot wɔ Rama.” 20 Ntɛm ara na Saul somaa abɔfo sɛ wɔnkɔfa Dawid. Bere a wohuu adiyifo mpanyimfo no sɛ wɔrehyɛ nkɔm na Samuel gyina hɔ rehwɛ wɔn so no, Onyankopɔn honhom+ baa Saul abɔfo no so, na wɔn nso yɛe sɛ adiyifo.+ 21 Bere a wɔbɛka kyerɛɛ Saul no, ɛhɔ ara na ɔsomaa abɔfo foforo, na wɔn nso yɛe sɛ adiyifo. Enti Saul somaa abɔfo bio, ne mprɛnsa so, na wɔn nso yɛe sɛ adiyifo. 22 Ɛnna ɔno nso kɔɔ Rama. Bere a okoduu abura kɛse a ɛwɔ Seku no ho no, obisae sɛ: “Ɛhe na Samuel ne Dawid wɔ?” Ɛnna wɔkae sɛ: “Wɔwɔ Naiot+ wɔ Rama.” 23 Ofi hɔ no, ɔtoaa so koduu Naiot wɔ Rama, na ɔno nso, Onyankopɔn honhom+ baa no so, na bere a ɔrekɔ no, ɔyɛe sɛ odiyifo kosii sɛ oduu Naiot wɔ Rama. 24 Ɔno nso yii ne ntade guu hɔ, na ɔno nso yɛe sɛ odiyifo wɔ Samuel anim, na ɔde adagyaw daa hɔ da mũ nyinaa ne anadwo mũ nyinaa.+ Ɛno nti na wɔka sɛ: “Saul nso ka adiyifo no ho anaa?”+